Episodes 5 ratsy indrindra amin'ny birao - Pop-Kolontsaina
Episodes 5 ratsy indrindra amin'ny birao
Ny fizarana amerikana an'ny The Office dia nisaraka tamin'ny valo taona lasa izay, ary mbola eo an-tampon'ny tabilao mivantana io. Matetika deraina toy ny sitcom lehibe indrindra misy mpanaraka antokom-pivavahana, azo antoka ny milaza fa Michael Scott sy co. dia ny Belle ny baolina.
Ny kilasika maoderina dia naharitra vanim-potoana sivy sy fizarana 201, ary ny ankamaroan'ny ampahany, ny seho ankafizin'ny mpankafy dia fitsangatsanganana tsy hay hadinoina miaraka amin'ny slip-up iray na roa, fa tamin'ny farany, namela anay afa-po sy nitsiky. Izay no Nolazainy!
Mora kokoa ny misafidy ny fizarana tsara indrindra amin'ny andiany noho ny an'ny ratsy indrindra. Saingy tsy misy na inona na inona mety ho lavorary sy maharitra mandritra ny sivy taona mahitsy, ary na hoe noho ny tsy fitantarana tantara ratsy, na ny fanaterana tsy dia tsara, na ny antony tsotra fotsiny dia misy ny fizarana sasany izay tsy tian'ireo mpankafy hialana fotsiny sy hanadinoany.
Angamba mbola tsy nisy namerina ilay fizarana Mafia na tsy nahatanty ny fifandraisana hafahafa an'i Pam niaraka tamin'i Brian, ilay mpaka sary na ny fotoana tsy takatry ny saina indrindra tamin'i Michael; ny fizarana birao ratsy indrindra matetika dia matetika no tsy mihomehy amin'ny tantara an-tsehatra ary mamoy be ny fon'ny fandaharana mahazatra.
Saingy tsy mila izany ny mpankafy satria afaka mandingana azy ireo mora foana izy ireo amin'ny fijerena izay lazainay fa fizarana dimy ratsy indrindra amin'ity sitcom malaza ity.
Fizarana dimy ratsy indrindra an'ny birao
# 5 Eto dia tonga ny Treble (Season 9 Episode 5)
Ny birao eto dia tonga treble (sary avy amin'ny NBC)
ny fomba hahitana ny talentanao miafina
Amin'ny maha fizarana iray amin'ny vanim-potoana 9, tsy dia misy loatra ny fanamafisana ny vazivazy ary miaraka amin'ny olana atrehan'i Jim sy Pam amin'ny tampony, sarotra ny mankafy ilay fizarana raha mahonon-tena.
Ny ampahany nahafinaritra indrindra tamin'ny fizarana dia ny akanjo Halloween an'i Dwight ary nahazo voatavo niraikitra tamin'ny lohany izy. Izany dia isan'ny fihomehezana iray grama, izay vetivety dia lany.
Miharihary fa tsy tian'ny mpankafy ny fifamalian'i Jim sy Pam nandritra ny fotoana ela, ary ny fizarana aza tsy nahavita nandanjalanja ny hatsikana tao anatin'izany tantara izany.
inona no ataon'ny tovovavy rehefa tiany ianao
# 4 Fundraiser (Season 8 Episode 22)
Ny famoriam-bola amin'ny birao (sary amin'ny alàlan'ny NBC)
Taorian'ny fialan'i Michael Scott dia very ny sisin'ny birao. Ary raha nanandrana namaha ny alahelo farany tamin'ny mety ho fanoloana dia nitarika an'i Andy hameno ny toeran'ny Michael.
Ilay fizarana 'Fundraiser' dia manandrana mandalina ny tantaran'i Andy ary azo raisina ho toy ny iray amin'ireo hadisoana nataony hafa, ka manjary mangarahara amin'ny mpankafy fa ny toetra mampivarahontsana toa an'i Andy dia tsy tena fitaovana mahery fihetsika.
Fizarana iray hafa fotsiny tamin'ny fizarana faha-8 izay manaporofo - indray mandeha sy farany - Andy's no Michael Scott!
# 3 Gettysburg (Season 8 Episode 8)
Ny birao gettysburg (sary avy amin'ny NBC)
Mifantoka amin'ny iray hafa amin'ny eritreritra hafahafa an'i Andy hitaona ny antony manosika ny mpiasan'ny Office, ireo mpanoratra dia tsy nanana ny fomba hamongorana azy io tamin'ny fomba niverenany tamin'ny andron'i Michael Scott.
Toa inona ny mahafinaritra - nanery ny mpiasan'izy ireo hanao dia lavitra i Andy na i Robert California nangataka azy ireo hamorona ny 'hevitra lehibe' manaraka an'i Dunder Mifflin?
Tsy misy ny valiny, ary izany no atolotry ny fizarana!
# 2 The Banker (Season 6 Episode 14)
Ny biraon'ny banky (sary amin'ny alàlan'ny NBC)
Ny fizarana tokana amin'ity lisitra ity miaraka amin'i Michael Scott. Izy io dia nanana an'io feon'ny fanoratana mahatsikaiky vanim-potoana 8 sy 9 io.
Mifantoka amin'ny fandrahonana ho avy tsy ho ela noho ny fitsidihan'ny banky mpampiasa vola be mpampiasa, ity fizarana ity dia mitaona ny fandaingan'i Michael sy ny fisandohana an'i Dwight ho Toby.
Ary na dia miverina ho toy ny flashback ho an'ny fanangonana tsy hay hadinoina aza ilay fizarana, dia avy amin'ny fanoratana kamo sy ny teti-dratsy fotsiny io.
# 1 Get The Girl (Season 8 Episode 19)
Alain'ny birao ilay zazavavy (sary avy amin'ny NBC)
Toy ny mandringa sy maneso rehefa maneno ny lohateny, iray amin'ireo antony marobe ity fizarana faha-8 ity izay mitana ny lisitr'ireo ratsy indrindra.
Mampiseho ny tantaram-pitiavam-pitiavan'i Andy sy Erin indrindra ny fizarana, izay amin'ny hitsiny dia tsy noraisin'ny mpankafy. Mipetraka mandritra ny antsasak'adiny mba hahita an'i Andy mitondra fiara manerana ny firenena hanarahana an'i Erin ary avy eo mamaly azy amin'ny fomba faran'izay sarotra dia zavatra tsy mendrika ny mpankafy.
Ary ho fanampin'ity korontana feno ity, dia nalain'i Nellie ny birao rehefa tsy teo i Andy. Mihanaka be izao ny fahitan'ny mpankafy azy tena mahasosotra ary tsy misy ratsy noho ny mijery azy mipetraka eo amin'ny seza iray ihany, ilay 'Michael freaking Scott' taloha!
Aza misalasala mizara ny lisitr'ireo fizarana ratsy indrindra ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
Vakio ihany koa: Kevin Feige dia mandrehitra tsaho crossover Venom sy Spider-Man goavambe
Nijery fandaharana sy horonantsary mikorontana be dia be aho. Mampihoron-koditra be dia be ny tantara an-tsehatra, ny mampientam-po sns. Mandraka androany dia mbola mahazo aina ihany aho amin'ny fijerena ny fizarana Scott's Tots pic.twitter.com/wlHCHLaa2I
maha-zava-dehibe ny maha-ara-potoana ny asa
- Nick Maraldo (@nickmaraldo) 8 Mey 2021
Vakio ihany koa: Nanolotra vola 4 tapitrisa $ ho an'ny kintana Sopranos James Gandolfini ny birao nanoloana an'i Steve Carell
Hijery ny fizarana ratsy indrindra amin'ny The office aho, amin'ny loop, mandritra ny mandrakizay noho io aretina homamiadana io. https://t.co/Kq2F1aMImY
- rawneat (Gyandu_04) 14 Mey 2021
Vakio ihany koa: The Conjuring: Ny devoly no nahatonga ahy hanao izany - Inona avy ireo ampahany amin'ilay sarimihetsika tena misy raha oharina amin'ny tena tantara?
Fanamarihana - Ity lahatsoratra ity dia maneho ny fomba fijerin'ny mpanoratra manokana.
rahoviana no hiverina ny romanina
zava-misy mahaliana holazaina amin'ny zazavavy
mandeha haingana be ve ny fifandraisako